सेयर मार्केटमा `कम्युनिस्ट कर´ ! «
नेपाली कांग्रेसले सेयर बजारको आन्दोलनलाई साथ दिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवत्ता विश्व प्रकाश शर्माले पनि सेयर बजारको आन्दोलनलाई साथ दिएका हुन् ।
उनले उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मेन्सन गर्दै ट्विट लेखेका छन् — सेयर मार्केटमा `कम्युनिस्ट कर´ ! नाफा कमाउंदा कर तिर्नु पर्छ l तर नाफा-घाटा टुंगो हुनु अघिनै कर तिर्नुपर्ने, सेयर मार्केटमा पसेको जनवादी बौद्धिकताको यो नितिले समृद्धिको यात्रालाई किमार्थ सघाउ पुर्‍याउंदैन l खारेज गरियोस् !!
लगानीकर्ताले बुधबार पनि लाभकरको विरोधमा शेयर कारोबार ठप्प पारे पछि शर्माको भनाइ बाहिर आएको हो । मंगलबार पूँजीगत लाभकरको विरोधमा उत्रिएका लगानीकर्ताले कारोबार ठप्प पारेका थिए।
स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालले शेयर कारोबार ठप्प भएकोमा धितोपत्र दलाव ब्यवसायीहरुको समेत संलग्नता रहेको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यतता नभएको भन्दै बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
शेयर खरीद बिक्री गर्न धितोपत्र दलाल ब्यवसायीहरुको कार्यालयहरु नियमित रुपमा खुल्ला रहेको र खुल्लानै रहने संघले जनाएको छ।
हकप्रद र बोनस सेयरमा अंकित मूल्यलाइ आधार मूल्य मानेर पुँजीगत लाभकर लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलित लगानीकर्ताले मंगलबार कारोबार नै ठप्प पारेका थिए। आन्तरिक राजस्व विभागले आइतबार यस्तो व्यहोराको पत्र पठाएसँगै आन्दोलित लगानीकर्ताले सोमबार दिनभर वार्ताद्वारा सहमति खोज्ने प्रयास गरेका थिए । तर, सोमबारको वार्ताबाट कुनै सहमति नजुटेपछि मंगलबार कारोबार नै ठप्प भएको हो ।
सार्वजनिक बिदाबाहेक नियमित कारोबार हुँदै आएको सेयर बजार यसरी बन्द भएको यो दोस्रोपटक हो । यसअघि गत असारमा धितोपत्र दलाल कम्पनीले सेयर खरिदबिक्री आदेश नै नलिएपछि कारोबार हुन सकेको थिएन । सरकारले धितोपत्र बजारको मनोविज्ञानविपरीत कर लगाउने निर्णय गरेको भन्दै लगानीकर्ता आन्दोलित भएका हुन् । लगानीकर्ता घाटामा भएको अवस्थामा पनि पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि आन्दोलित लगानीकर्ताको आन्दोलन थामिने छाँट नदेखेपछि सरकारले बुधबार अर्थमन्त्रालयमा वार्ताका लागि लगानीकर्तालाई वोलाएको छ।